Home Wararka Muqdisho ‘oo qarka u saaran’ xaalad dagaal & cabsi xoog leh
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad looga cabsi qabaa inay gasho xaalad la mid ah bishii April 2021, markaasi oo ay ka dhaceen dagaallo looga hortagayey muddo kororsigii sharci-darrada ah ee ay sameeyeen madaxweyne Farmaajo iyo Maxmaed Mursal.
Waxaa hadda caasimadda ka taagan khilaaf siyaasadeed xooggan oo ka dhashay boobka lagu hayo kuraasta golaha shacabka, oo si musuq-maasuq xooggan ah loo maareynayo.
Golaha Midowga Murashaxiinta ayaa bayaan ay soo saareen 30-kii November ku caddeeyey “inuusan raalli ka ahayn, aqbalayn, qaybna ka noqon doonin boobka socda ee lagu dibindaabinayo shacabka Soomaaliyeed, laguna burburinayo geeddi-socodkii nabadda iyo dhismaha dowladnimada.”
Dadka siyaasadda taxliiliya ayaa ka cabsi qaba in go’aanka mucaraadka iyo is-mari waaga taagan uu Muqdisho ku celin karo xaaladdii ay soo martay April 2021.
“Halista waxay tahay inaan arki karno marxalad la mid ah tii aan aragnay bishii April,” waxaa sidaas wakaaladda wararka Anadolu u sheegay Rashid Abdi, oo ah fallanqeeye siyaasadeed, isaga tixraacaya dagaalkii ciidamada Farmaajo iyo kuwa Badbaado Qaran.
“Xalka waa in lagu laabtaa hanaankii doorasho ee 2016, oo aan wax isbeddel ah lagu sameyn, sidoo kalena isbeddel lagu sameeyaa hoggaanka guddiga fulinta doorashooyinka heer federal (FEIT),” ayuu yiri Rashid.
Abdikarim Hassan Mohamed, oo ah qareen, ayaa sheegay in mas’uuliyadda ay saran tahay ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu xaqiijiyo in Soomaaliya “aysan ku dhicin dagaal.”
“Marka aad haysato hanaan sida midkan doorashada dadban oo kale ah, waxaa mar walba jira fursad ay ku dhacaan eedyemahan oo kale ee khiyaameynta iyo xadgudubyada,” ayuu yiri.
“Dhammaan saamileyda waa inay dhinac iska dhigaan danahooda, oo ay eegaan sida ay xaaladda Soomaaliya u jilicsan tahay iminka, ayna danta shacabka ka hormariyaan wax kasta oo kale. Ra’iisul Wasaaraha wuxuu u baahan yahay inuu hoggaamiyo oo uu mideeyo dhammaan dhinacyada.”
Midowga Murashaxiinta ayaa bayaan ay soo saareen 30-kii November ku qaadacay kuna dalbaday in la joojiyo doorashooyinka dalka ka socda.
Si kastaba, ilo-wareedyo ku dhow xafiiska Rooble ayaa Caasimada Online u sheegay in qaadacaadda mucaaradka Rooble aysan waxba ka beddeleyn mowqifka Rooble ee ah in doorashooyinka dalka ay sii socdaan, wixii cabashooyin ah ee jirana la xaliyo.
Haddii aan xal deg deg ah la helin, islamarkaana Rooble garwaaqsan in boobka aanu sii socon karin, waxay Muqdisho geli kartaa xaalad la mid ah tii April.
Previous articleMaxaa u Haray Somaliya oo ay Sugeysaa oo aan ka ahayn in uu Dalka Dumo Gebi ahaan.?
Next articleDowladda Mareykanka oo ku qasabtay Rooble in uu hakiyo Doorashada
Dhulka Ismaamulka Soomaalida oo oo si fiican looga ciiday (Sawiro)